Korintofo II 9 NA-TWI - Mmoa a wɔde boa Onyankopɔn nkurɔfo - Bible Gateway
Korintofo II 8Korintofo II 10
Korintofo II 9 Nkwa Asem (NA-TWI)
9 Ɛho nhia sɛ mekyerɛw mo fa mmoa a wɔboa Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ Yudea no ho. 2 Minim sɛ ɛyɛ mo pɛ sɛ moboa nti, mede mo ahoahoa me ho akyerɛ nnipa a wɔwɔ Makedonia no. Mekae se, “Anuanom a wɔwɔ Hela” no siesiee wɔn ho sɛ wɔbɛboa afe a etwaam no mu. Mo ahokeka no akanyan wɔn mu fa kɛse no. 3 Afei merema anuanom yi aba mo nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a hoa a yɛde wɔn hoahoa yɛn ho no nyɛ nsɛnkeka kwa. Na, sɛnea mekae no, mubesiesie mo ho aboa. 4 Sɛ anyɛ saa na sɛ nnipa no ne me fi Makedonia ba behu sɛ munsiesiee mo ho a, yɛn anim begu ase. Ɛnyɛ mo anim gu a ebegu ase nko, na mmom, sɛ yɛwɔ mo mu ahotoso no nso ka ho.